Ungasibhalisa njani isixhobo sakho njengonjiniyela ukuze uhlaziye kwi-iOS 5 kwaye ufumane yonke into isebenza (UPDATED) | IPhone iindaba
Ungasibhalisa njani isixhobo sakho njengonjiniyela ukuze uhlaziye kwi-iOS 5 kwaye ufumane yonke into isebenza (UPDATED)
UGonzalo R. | | iOS 5, Izifundo kunye neencwadana
Ndifumana ii-imeyile ezininzi kunye nemibuzo kwi-twitter malunga Uhlaziya njani kwi-iOS 5. Emva koko ndiza kukuxelela indlela endenze ngayo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ubhaliswe njengonjiniyela, kodwa ukuba awungomphuhlisi ungasibhalisa isixhobo sakho ngokungathi ubukho. Ngale ndlela uya kuba nefayile ye- IOS 5 isebenza ngokupheleleyo, ukusukela ukuba usebenzisa amaqhinga esele sibonile, awuzukukwazi ukwenza iminxeba kwi-iPhone yakho kuphela, kodwa uya kuba nakho ukukhubaza ukhetho kwi-iPad yakho okanye kwi-iPod Touch yakho.
Umsebenzisi oqhelekileyo weendaba ze-iPhone wandinika ukuba ndibhalise izixhobo zam, ngale ndlela ndikwazile ukufaka i-iOS 5 kwi-cisemthethweni kwaye isebenza ngokupheleleyo. Kwimizuzu embalwa ndimnike ii-UDID zam kwaye wabhalisa izixhobo zam, wandinika amakhonkco okhuphelo e-iOS 5, faka kunye ne-voila, ndiyayivavanya kwaye kuyamangalisa.
Imeyile yakho yile: registraudid@gmail.com
Apho ungabhala kwaye iya kukwazisa ngamanyathelo oza kuwalandela, kwi kuphela 5 € izakubhalisa i-UDID yakho, njengoko ndibhalisile izixhobo ezi-5 indenzele ixabiso elikhethekileyo; Ndikuxelela ukuba ndiyenze njani inyathelo ngenyathelo xa ufuna ukonwabela zonke iindaba ze-iOS 5.
Kwi-iTunes ucofa imouse apho ithi "Inombolo yeNombolo" kwaye i-UDID yakho ibonakala njengoko ubona kwisikrini esingentla, ukopa loo nombolo, uyithumele kubo ngeposi kwaye kwimizuzu embalwa unakho isixhobo sakho silungele ukufaka i-iOS 5.
Lo mfanekiso sisiqinisekiso sokuba uyakuthumela ukuze ubone ukuba ubhalisiwe.
Eyona ilungileyo: isixhobo sakho siza kubhaliswa njengonjiniyela for Kwixesha elizayo iOS 5 ibhetas Akukho ngxaki: iOS 5 beta 2, beta 3 or GM. Ndiyakuqinisekisa ukuba ngumntu othembekileyo, uya kukunika amanyathelo kwaye akuthumelele ikhonkco lokukhuphela le-iOS 5 yesixhobo sakho.
Njengoko benditshilo ukuba ndibhalisile zonke izixhobo zam. Kufanelekile.
Ndiyathemba ukuba amagqabantshintshi ngamava akho kwisithuba.
OLUHLAZIYIWEYO 02/09/2011: Abafundi baqinisekisa ukuba le ndlela iyaqhubeka nokusebenza kwaye bayaqhubeka nokubhalisa i-UDIDS kwi-imeyile enikiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 5 » Ungasibhalisa njani isixhobo sakho njengonjiniyela ukuze uhlaziye kwi-iOS 5 kwaye ufumane yonke into isebenza (UPDATED)
molo gnzl kwaye ukuba sele ifakiwe ndingathanda ukubuyela ku-4.3.3, amanyathelo anokulandelwa njani? Ndiyabulela kwangoko.
U-Antonio, ukukhuphela kulula kakhulu, ubeka kwi-DFU kwaye uqhagamshele kwi-iTunes kwaye ucinezele ukubuyisela.
UFrancisco: Ndiyenzile nge-paypal.
Uhlawula njani ii-euro ezintlanu?
Ke ngekhe kube yimfuneko ukugcina i-shsh ngaphambili?
ayisiyo-antonio, kuba ingxelo yangoku eyi-4.3.3, ungayenza ngaphandle kwe-SHSH, ukuba ufuna ukwehlisela kwinguqulelo engaphambi kwe-4.3.3 ukuba ufuna i-SHSH.
kulungile enkosi kakhulu ngolwazi kunye nokuphendula ngokukhawuleza, ungoyena ungcono. Ihagi.
Ulwazi oluhle! Njengesiqhelo ukunceda abasebenzisi be-iphone bayonwabele ngakumbi! Enkosi !!
I-Gnzl umbuzo okhawulezayo okoko une-IOs 5, ihamba njani? Ngaba i-iPhone iyacotha? Ngaba ifana nokutshintsha ukusuka kwi-ios 3 ukuya kwi-i4?
ihamba kakuhle kakhulu, ingcono kune-beta ye-ios 4 ngelo xesha ...
ayicothisi kwanto kwi3GS, yayiyeyona nto indoyikisayo
Ingxaki kuphela endiyifumanayo kukuba eminye imidlalo iyawa
Sinazo nge-4.5 euro siliqela labaphuhlisi
Kwi-eBay ungayenza le € 1.
Ndiyathandabuza ukuba yeyama- € 1
kodwa umahluko uyaphawuleka, umntu omthembileyo ushiya i-UDID ebhalisiweyo kwaye kwi-ebay abantu abaninzi sele benike izimvo zokuba bayayicima i-UDID kwiintsuku ezimbalwa kwaye ngekhe uphinde uyibuyise.
Umbuzo Gnzl, Ukuba ndiyabhalisa kwaye ndihlaziye kwi-beta 1, ndiza kuba nakho ukwenza ukungqinelanisa nalo lonke ulwazi endinalo, akunjalo? Omnye umbuzo oza engqondweni kukuba ingaba i-wahtsapp isebenza kakuhle kwi-beta1.
Okokugqibela, undicebisa ukuba ndizame i-beta, ukuze izinzile, isebenze, njl. okanye ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kungcono ukulinda!?
Ndikucebisa ukuzama, ukuba awuqinisekanga ukuba ungabuyela ezantsi.
I-WhatsApp isebenza, unayo iMessages!
Ewe ungangqamanisa, khumbula ukugcina ikopi ngaphambili kwi-iTunes
Nceda, ungawenzi u-SPAM amaphepha akho apha, ayisiyondawo.
Sijonga esona sisombululo silungileyo kuye wonke umntu, njengoko kubonisa xa uhlawula, uzivulela itikiti
Uxolo uJuan Andres kodwa andikwazi, andinabudlelwane naye registraudid@gmail.com, kodwa ndiyazi ukuba ungumntu onokuthenjwa, yiyo loo nto ndimcebisayo.
Ayikuko ukuba awukwazi i-SPAM kulo msonto, kukuba akukho mntu unokuyenza nakweyiphi na, ndicinga ukuba yinto osele uyazi.
Kanye kwii-io ze-5, ngaba inokuvulwa nge-ultrasn0w?
UGonzalo singalibeka inqaku
Umbuzo okhawulezileyo… ingaba i-Instagram isebenza kakuhle kwi-IOS 5?
Enkosi kakhulu kwakhona
Umbuzo omnye, ngalo msebenzi sinokukhuphela i-iTunes 10.5 okanye enokwenziwa nangubani na, ngaba kufanelekile ukufaka i-iOS5?
Sele ndiyithumele i-imeyile kodwa andikafumani mpendulo ...
Imibuliso kunye nombulelo kule webhusayithi
iTunes 10.5 ayimfuneko ukufaka i-iOS 5
Kuthekani ukuba ndifuna ukuyenza?
UDavid Porto sitsho
Ndithumele i-imeyile ku registraudid@gmail.com Ingaphezulu kweyure kodwa ndingafumani mpendulo.Uyazi ukuba uneeyure okanye uhlala ethatha ixesha ukuphendula?
I-Redsn0w 0.9.8b1 ukuya kwi-jailbreak iOS 5b1 kwi-Windows ngoku iyafumaneka | IPhone iindaba
Ndizakwenza isifundo ngomso ukuba uyafuna.
UJose Carlos sitsho
I- € 5 ibonakala ininzi kakhulu kwinto engasebenzi kakuhle kwaye kuya kufuneka unyamezele ngaphezulu kweenyanga ezi-2.
Nge- € 1 ndiza kuyizama ngenjongo yokufuna ukwazi.
Andiyiyo iGnzl kodwa ndiza kuzama ukusombulula eminye imibuzo oyibuzayo
Ayinakuvulwa nge-ultrasnow kwi-iOS5 njengoko iyi-baseband engekavulwa.Ingavulwa kuphela xa kukhutshwa i-CUSTOM FIRMWARE.
Ukuba inokophuka ejele kodwa kufuneka iphinde yenziwe ngalo lonke ixesha ucima isixhobo, sebenzisa i-redsnow yamva nje
Ukuba uyazisola, beka isixhobo kwimo ye-DFU kwaye ubuyisele kwi-4.3.3
Oko kuthethwa nguGnzl kukuba kwi-1 euro ngokuqinisekileyo baya kubakho abantu abayenzayo kodwa abangathembekanga kwaye ungaphulukana nethuba lokubuyisela isixhobo kwilixa elizayo, ukuba ayifanelekanga ukuba semngciphekweni
Ndiyabulela kakhulu i-DjDared ngoncedo lwakho, ngokwenene.
Yitsho nje ukuba ungayikhupha nge-gevey sim, nangona unokulindela ngcono baseband.
Ndithumele i-imeyile kwidilesi registraudid@gmail.com kwaye okwangoku abakandiphenduli ... masijonge ukuba ayithathi xesha lide na, ukubulisa
Imithi yom-oki sitsho
inkcukacha ze-gnzl ukuba ubhaliso njengonjiniyela lonyaka omnye. ukuba andididekanga.
ungabona phi ukuba ubhalisile?
ungayibona kwisikrini abakuthumelela sona xa bekubhalisa
kodwa ayikho enye indlela? kukuba ndicinga ukuba eyam ibhalisiwe kodwa andikhumbuli kude kube nini
Umbuzo we-Gnzl: Ndine-iPhone 4 yasimahla ethi ukuba ndakwazi ukufaka i-IOS 5 ngekhe kufuneke ndivule ngeenkqubo okanye nantoni na, akunjalo?
Oko andazi ROBLES
I-Pablo awuzukuyivula kuba sele unayo simahla (ukuba ayifektri yasimahla okanye ikhutshwe yiimei)
Kodwa masibone, ukongeza ekubeni nako ukufaka i-iOS 5 b1 zeziphi ezinye izibonelelo ezinazo? Kuba njengoko ndifundile apha ngasentla kunokwenzeka ukuba ungabinakho ukubuyisela kwakhona !! Ndiyazi ukuba kusemthethweni kwaye konke oko kodwa ukubakho kuyaqhubeka okhoyo !!
Ndinokhetho lonjiniyela (ukwenza okanye hayi) ngokugcina nje kwimenyu, unayo efanayo?
Enkosi kakhulu kwi-Djdared !!!! Kwaye ekubeni ndiyifundile iGnzl ukuba ndinengxaki nge-beta ndingasoloko ndiyifaka kwi-DFU ndibuyele kwi-4.3.3… .. kunjalo ???
Ewe uPablo, okoko nje u-4.3.3 eyiFirmware yokugqibela enokukhutshelwa (kubasebenzisi abaqhelekileyo) ungabuyela umva ngaphandle kwe-sshs. Oko kukuthi, kude kube ngumhla wokukhululwa "ngokusesikweni"
IOS 5 kuye wonke umntu ukuba akhuphele ngaphandle, akusayi kubakho ngxaki ekubuyiseni i4.3.3
I-Djdared: Uqinisekile andidingi kuyigcina i-SSHS yam ukuze ndiye kwi-4.3.3? Oko ndasuka kwi-iPhone EDGE ukuya kwi-4 simahla kumzi-mveliso, yonke into enxulumene nokuqhekeka kwejele kunye nokukhululwa kwe-iPhone ayilandelwanga hahaha
Ndisandula ukufumana i-imeyile ngolwazi kunye namanyathelo ekufuneka elandelwe, intlawulo yenziwe kunye nokukhuphela i0S5 beta 1.
Umbuzo omnye, xa ndilungile ukuba "ndingumphuhlisi" kwaye ndikhutshelwe i-firmware, ndihlaziya njani? I-Skewer ibuyisela + utshintsho ekunene?
UFernando: ewe, ngokuchanekileyo.
I-Israel: hayi, ngekhe ube nakho ukufaka i-iOS 5
Ukuba ndine-ipad baseband kwii-3gs zam, ndiya kuba nakho ukuvula kwi-iOS 5 ngejele?
U-Israyeli, ukuba andiphazami, ngekhe ufake nayiphi na i-firmware esemthethweni, kufuneka ulinde i-iOS 5 ukuba iphumele wonke umntu, uhlaziye umoya opholileyo wekhephu kwaye wenze i-firmware yesiko engafaki i-baseband
i-djdared: sn0breeze sele ihlaziyiwe, kodwa i-ultrasn0w ayikaxhaswa
Kudala ndivavanya i-iOS 5 iveki kwaye ewe, izinzile kune-iOS 4 beta1 kodwa ayizinzanga ngokwaneleyo ukuba ingasetyenziswa nesixhobo sakho esiphambili. Itshisa ibhetri, ICloud iyaphendula xa ufuna. Nangona iiapps ezikhutshiweyo kwi-appstore zisebenza kakhulu, oko akuthethi ukuba abanangxaki, kuba banazo. Ngokubanzi, ukuyivavanya, ipholile kakhulu, kodwa ukuba ucwangcisa ukuyisebenzisa kwisixhobo sakho esiphambili, ndingacinga kabini.
Enkosi kwakhona kuDjdared noGnzl ngoncedo lwakho; Ndiyathemba ukuba lo ngumbuzo wokugqibela hahaha: Sele ndikhuphela i-iOS 5 njlnjl kwaye ndiyathemba ukuba ndiza kuyisebenzisa kwakamsinya kodwa ukusukela ICloud ingazukusebenza kude kube kokwindla, ndiyisebenzisa njani i-iPhone? Kuthekani ngeakhawunti ye-MobileMe kunye ne-imeyile? Ngaba iya kusebenza ngokufanelekileyo? Enkosi!!!
Yiya Macpo sele undenze ndathandabuza ays hahaha; Gnzl kwenzeka into efanayo kuwe njengoMacpo ???
pablo, ICloud sele isebenza. Ewe, isebenzisa ibhetri engaphezulu
Nje ukuba ukufakwa kwe-beta ye-ios 5, ngaba singafumana kwakhona idatha kwindawo yogcino?
Inomdla kakhulu ... nje ukuba i-5 yeerhafu ihlawulwe, ngaba inkqubo yokunyuselwa kwi-ios5 kulula ngaphandle kwamava entolongweni okanye ekuphuhliseni? Ngaba bayayichaza inkqubo ngeposi okanye ngaba bayayifundisa ngewebhu?
UJuanmi, ewe, bakuxelela ngeposi.
Pablo, ICloud ihamba kakuhle kum, kuba yonke imihla andicacanga, zama ukuyibona.
Ewe, ukuya ezantsi, DFU + buyisela.
Kulungile ngaphandle kwebhetri bendibhekisa kwezinye izinto athe uMacpo njengeengxaki nge-ICloud njl. Ngaba ucebisa ukuyifaka kwi-iPhone 4 yokusetyenziswa kwemihla ngemihla? Aunq ulungile ukuba ndiyabona ukuba ayizukuhamba kakuhle ndingasoloko ndisiya kwi-4.3.3; Kuya kufuneka ndibeke i-iPhone 4 kwimowudi ye-DFU okanye ndiyidibanise ne-iTunes kwaye ndiyinike ukuyibuyisela, ngaba kufanelekile?
Enkosi kwakhona!! 🙂
Yiloo nto uGnzl wayesoyika….
kuxhomekeke kuyo nganye
molo, Gnzl, eminye imibuzo… .Ukuba ndibhatala i-euro ezintlanu ze-beta 5, xa kulandelayo kuphuma, kuya kufuneka ndihlawule kwakhona, okanye iya kuba nakho ukukhuphela ngaphandle kwengxaki? kwaye enye into, xa igosa liphuma, kuya kufuneka ndihle ndiye ku-1 ndize ndihlaziye okanye ngokuthe ngqo ukusuka kwi-beta iye kwigosa?
njengoko isitsho kwiposti ungayihlaziya ngaphandle kweengxaki kuzo zonke ii-betas.
Xa eyokugqibela iphuma, uyahlaziya kwaye yenziwe, awunyanzelekanga ukuba uhle.
Ukuba oko kuyinyani kwaye njengetekhnoloji kwaye andihambelani andazi ukuba ndiyafuna hahaha
Ngendlela, ukuba ndiyifaka kwi-DFU + buyisela ndiyifumana phi inguqulelo 4.3.3? Enkosi!
Pablo, iitunes ezisezantsi zodwa
Sele ndibhalisile i-UDID yam, ikhawulezile kunokuba bendilindele.
Ndithumele i-imeyile kueregistraudid.gmail.com malunga ne-11: 00 kunye nekota yeyure eyadlulayo sele endithumele umfanekiso wokuqinisekisa, njengoko uGnzl esitsho kwiposti yokuqala
Ewe, ukuvavanya i-IOS5 kwaye ubone ukuba ibhetri ihlala iiyure ezi-2 ubuncinci xD
Sele bengumphuhlisi…. nqamla iminwe yethu !! indlela yokubonisa ukuhleka
Ndiyifakile ios 5 enkosi kuregistraudid.gmail.com kwaye yonke into ilungile. Ndinombuzo nje, ndingalungelelanisa njani idatha ye-iPhone kunye ne-itunes? indixelela ukuba ndifuna i-iTunes 10.5, ngaba ndifuna iakhawunti ye-icloud?
jooooder ... 730 mb iOS 5 beta 1, ndiyacula, umntu angandixelela ikhonkco elithembekileyo ngaphandle kwale linikezelwe kwi-imeyile, kuba uyalikhuphela kum
I-Elenian ndikwanayo ios 5 kodwa andazi ukuba ndiyifaka njani kwi-iphone; Ungandinceda? Enkosi!
Sele ndimthumele iposi kwisiqingatha seyure esidlulileyo… kwaye andazi nto…. kukuthathe ixesha elingakanani? Uyenza njani intlawulo? Ngaba uhlawule pal ngekhadi ??
Akho ndlela yimbi sitsho
Igalelo elikhulu le-Gnzl, bendikhangela into enjalo nabantu abathembekileyo kwaye bayilawule kakuhle.
Wena obesebenzisa i-iOS5 ixesha elide, zeziphi izinto ezisisiseko zeCydia ezisebenzayo? Kuya kuba kuhle ukuba sonke senze uluhlu oluncinci, akunjalo? Umsebenzi weSbsettings?
Sele ndikuthumelele i-imeyile.Ndingathanda ukuzama le nkqubo intsha yokwazisa !! Enkosi ngolwazi !!! Ukuba bandiphendule kwakamsinya !!
Ndicinga ukuba i-SBSettings ayisebenzi ... umthetho kwesinye isithuba umphuhlisi azama ukusisebenzisa kwiziko lezaziso ... kubonakala ngathi licebo elihle kum ... Ekugqibeleni iziko lezaziso liza kuba incinci kakhulu kuzo zonke izinto eziza kuphuma ... ndiyaqhubeka nokubalinda ukuba baphendule ngeposi….
Ngaba ukhona omnye umntu ofumana impazamo 3002 xa uhlaziya okanye 3194 xa ubuyisela? Ndizifumana ezi mpazamo zimbini kwaye andikwazi ukuya phambili.
Sele ndiyivulile ifayile yokubamba kwifolda yeWindowsSystem32driverfc.ndisuse yonke imigca ebeke i-gs.apple.com (bendinengxaki xa ndihlaziya ukuya ku-4.3.3 ndisusa imigca emibini ehlaziyiweyo) kodwa qhubeka ngaphandle kwalonto kwaye akukho nto
Ndibonile ukubeka i-74.208.10.249 gs.apple.com ekugqibeleni kwaye ndibuyisele kwaye ndifumana i-3194
Yintoni enye endinokuyenza ngaphandle kokuya phambili?
Ndithathe malunga neyure ukuphendula kwi-imeyile kwaye nje ukuba ndenze intlawulo (i-paypal) engaphantsi kwemizuzu engama-30 yokuqinisekisa ukuba iakhawunti yam yonjiniyela sele yenziwe yasebenza. Ngoku ndikhuphela i-iOS 5 ethi, njengoko benditshilo ngaphambili, ingama-730mb akhonto ...
Morpheus Ndicinga ukuba le ngxaki kungenxa yokuba uqondise kwakhona iiseva ze-apile kwiiseva ze-cydia kwaye ngoku ayiyiboni into yokuba iyasebenza ... Faka iTinyUmbrella kwaye apho uyikhangele khona ibhokisi ukuqhagamshelana neeseva ze-cyidia kwaye uyisebenzise, ​​kufuneka isonjululwe. Kuvavanyo olubi kwenye ikhompyuter apho ungakhange uchukumise iiseva kwaye kufuneka isebenze ...
Ndiziphendula malunga neempazamo ezingama-3002 kunye nama-3194
Ndiyitshintshe izibuko le-USB. Impazamo 3002 yeza kwakhona xa izama ukuhlaziya kodwa ukubuyisela kulungile. Ngapha koko ufaka ngoku
Masibone ukuba yonke into izakuhamba kwimizuzu embalwa ezayo
Pablo kuya kufuneka unike uhlaziyo ngotshintsho olucofisiweyo kwaye emva koko ukhethe ios5 oyikhuphelileyo
morpheus undinika impazamo efanayo 3002 ... uyabuyisela umsebenzi? Enkosi
Kuyimfuneko ukufakela i-Itunes 10.5, okanye kulungile ngesiqhelo ukufaka i-IOS 5 kwaye uyilawule kamva kwikhompyuter.
Nditshintshe izibuko le-USB kwaye ndayinika ukuba ibuyisele kwaye ufakelo lusebenze ngaphandle kweempazamo
Ngoku ndizama ukufaka i-Itunes 10.5 yokuba i-10.3 ayiyiboni iphone
Kwaye emva kweyure enesiqingatha andikazinto ... ingaba uyalala?
Ndibeke iposti ngaphambi kokuba nditsho ukuba ungayenza le nto kwi-eBay nge-1 euro kodwa ke iinkosi ze-iphone yangoku ziyicimile iposti ...
Khange ndicinge ukuba le yile ilk.
Ndiyenzile intlawulo kwaye bandiphendule ngokukhawuleza okukhulu.
Sele ndibhalisiwe njengomphuhlisi ...
Ndiza kukhuphela i-iOS5 ukubona ...
Ndiza kukuxelela ngayo.
Molo, kubonakala kum ukuba ukubhalisa i-udids akukho semthethweni, kwezi ntsuku abantu basejelebreakzone bafumana ileta evela kuApple for that
Lucas, bhala kwakhona.
fMac, akukho mntu ucimileyo, iposti yakho iphezulu, ndikuphendulile.
funda phambi koqhankqalazo.
Molo, nditsho nje ukuba ndiyibhalisile i-UDID ngaphandle kwengxaki, ngokukhawuleza okukhulu. Kucetyiswa ngokupheleleyo ukuvavanya i-iOS entsha. Konke okugqibelele!
Ngaba umntu unokundichazela into ekufuneka ndiyenzile xa sele kuqinisekisiwe ukuba ndibhalisiwe njengomphuhlisi kwaye ndikhuphele ios5?
UJuanmi, cinezela ishifti + ubuyisele kwi-iTunes kwaye ukhethe i-firmware iOS 5
(alt + buyisela kwiMac)
Ndiyenzile le nto kwaye indinika impazamo (3002 ndiyacinga. Ndiyifundile into engentla kodwa akundicacelanga ukuba ndiyisombulule njani ...).
Ndiyenza ngeewindows kunye nenguqulelo yesiqhelo ye-itunes (10.3) kuba ngoku andinayo i-mac phambi kwam, kwaye ikhonkco abandithumele lona ukusuka kwi-itunes 10.5 ye-mac kuphela
UJuanmi, eyona nto ilula kukuba uyenze kwenye ikhompyuter
umgcini wengxowa sitsho
Sele ndinayo iakhawunti yonjiniyela kunye nabo. Njengoko besitsho, ii-3's's: good, nice, cheap.
Molo: ukuba ndiyahlaziya, ayindishiyi ndinike impazamo 3002 kwaye ukuba ndiyabuyisela, ndifumana isilumkiso seTunes «Esi sixhobo asifanelekanga kulwakhiwo oluceliweyo» …… .. uvuyo lwam equleni; (
Pablo, zama enye ikhompyuter nayo, loo mpazamo ivela kwi-USB
Iposi sele ifikile, ndenza intlawulo kwaye kwimizuzu emihlanu wandiphendula. Ngokukhawuleza kakhulu kwaye ulunge kakhulu. Ukukhuphela i-iOS 5. Inye into yokubona ukuba ndiyayiqonda ngokuchanekileyo, emva koko ukuhlaziya kwi-iOS 5 akuyomfuneko nge-iTunes 10.5, kodwa ukuba ndifuna ukungqamanisa, ngaba ndiyayidinga? Kukufakela i-backup nezinto zam ... Enkosi
ukuvumelanisa ngentambo ufuna iMac nge-iTunes 10.5, kodwa ungalibali ukuba kwi-iOS 5 akusafuneki ukuba uvumelanise ngentambo!
umbuzo, ngaba omnye umntu onxibelelana naye ulahlekile kwincwadi yefowuni ???? Ndingenza njani ukuze ndibabuyise?
Molo Gnzl, ndiyinika kwi-itunes ukubona i-UDID yam, kodwa ndifumana i-ellipsis ezintathu ekugqibeleni, andazi nokuba kungenxa yokuba ilandela ukubalwa kwenani okanye yintoni, andazi ukuba ndiyibone njani ngokupheleleyo.
kodwa, kwenye ikhomputha eneewindows kunye ne-iTunes 10.3 okanye kwi-mac? Yinto encinci ngenxa yokuba iikhompyuter ezintathu endinazo apha ziyafana kwaye ziyahambelana nezinye ii-iPhones. Ukuba ndiyenza kwenye ikhompyuter, lonke ulwazi lwam kunye neeapps aziyi kulungelelaniswa, akunjalo?
Gnzl: Kwaye ukungqamanisa indawo yogcino lwam ukuba andinayo iMac yokwenza ngentambo, yenziwa njani? Ndicinga ukuba ukuba ndifuna ukwehlisa indawo ngokuyibeka kwi-DFU kwaye ndiyibuyisele, i-iTunes 10.3 iyakuyifumana kwiifestile, akunjalo?
Kulungile, ndikhumbule nje ividiyo ye-Apple yale ndoda ifike idiniwe ivela emsebenzini wayo kunzima ukufumana i-iPhone kwikhompyuter kwaye ivumelanisa i-iPhone nge-Wifi ... ndiyaqikelela ukuba iya kufakwa njani i-backup .. ..
Javier, tshintsha isisombululo esingahambelani kwiscreen
juanmi, kuye nakubani na, inokuba ziifestile.
U-Lucas, osuka kwi-mac ungangqamanisa ngentambo, ukusuka kwi-wireless win, ewe, i-iTunes 10.3 iyifumana kwi-DFU njalo.
kwabo banempazamo 3002 (njengam)
I-iPhone icinyiwe, iTunes ivaliwe kwaye ndadibanisa intambo ye-iPhone apho bendinebhodi yezitshixo kunye nebhodi yezitshixo apho bendine-iPhone kwaye ayisandiniki mpazamo. Iyalayisha
Ke kuthi abo baneefestile, i-itunes 10.5 ayimfuneko, nge-10.3 iya kusebenza ngokupheleleyo zombini ukungqamanisa ngentambo kunye ne-wifi? Uxolo, kodwa ndikwimeko embi
I-Gnzl: impazamo efanayo nakwi-PC nangona phaya ndisebenzisa i-iTunes 10.3; Ingakumbi kuzo zombini iMac kunye nePC iTyUmbrella ayikwazi ukugcina i-SHSH yam kwaye indinika impazamo efanayo ne-iTunes ……
Socooooorrroooooo ndenza ntoni, sele ndinayo i-firmware ekhutshelweyo kwaye iakhawunti yonjiniyela yenziwe yasebenza, ndinayo i-iTunes 10.3, okanye akunjalo? Ungqamaniso lundithintela kakhulu, Gonzalo ndikhanyisele ngobulumko bakho nceda
Itunes 10.5 yeewindows
Iphi i-itunes 10.5 yeefestile? akufuneki ubekho? okanye uphume nje usindise ubomi bam
Molo Gnzl, ndilinde ukuba uphendule i-imeyile ukuze wazi ukuba ubhatala njani. Ngoku, ndiwalandela ngocoselelo amagqabantshintshi, kwaye into engacacanga kum yile:
Ndifuna emva kokuba ufakelo lwe-iOS5 lugqityiwe, ukufumana kwakhona isipele sam, ke ngaba oku kunokwenzeka ngewindows xp PC kunye ne-iTunes ngentambo? Yeyiphi ingxelo ye-iTunes, 10.3 okanye 10.5?
Ndizamile ukuvumelanisa nge-wifi ... kodwa iqhosha kwi-iphone linje ... kwaye ndinekhompyuter kunye ne-itunes kwaye zombini zixhunyiwe kwi-wifi efanayo ... Uzibuyise njani ii-backups?
UJuanmi, xa ufaka iphone "entsha" kwikhompyuter, iya kukubuza ukuba uyafuna ukuyilungisa njengentsha okanye ukuba ufuna ukuyilungisa njenge "yesiqhelo" (iphone kaJuanmi umzekelo)
Ungayenza kwenye ipc ngaphandle kokumisela okufanayo nezinye.
Kodwa into endiyithethileyo, ndiye kwifayile yenginginya ngaphakathi kwifolda C: \_ Windows \_ System32 \_ driver \_ etc
kwaye apho ndicime imigca ebekwe ngu.apple.com kwaye ndagcina ifayile
Emva koko nditshintshe i-usb port apho ndandiplahla khona i-Iphone kunye nempazamo eyi-3194 xa ukubuyisela kuye kwanyamalala. Ama-3002 asekhona kodwa ndikwazile ukuyifumana ngokulungisa.
Gnzl yenziwe !! Kwakungeyona into ye-USB! Ndizamile ukungakhangeli ezinye iibhokisi kwi-TinyUmbrella kwaye inkqubo ikwazile ukugcina i-SHSH yam kunye ne-iTunes ukufaka io5! Uff leliphi ixesha elibi endikhe ndadlula kulo hahaha; okokugqibela: ndibuyisela ukusuka kugcino okanye njenge-iPhone entsha ?? !!
Pablo, kwindawo yogcino ukuba ufuna ukushiya yonke into njengangaphambili
Ndicebisa njenge-iPhone entsha!
Nceda!! Ngoku ndivumelanisa njani nekhompyuter yeWindows 7 ???? Ngaba ukhona umntu onayo? Kwaye iGnzl yintoni le iTunes 10.5 yeWindows?
I-iTunes 10.5 ye-Beta Win: http://www.megaupload.com/?d=XD4TGIRO
I-iTunes 10.5 ye-Beta Win-64bit: http://www.megaupload.com/?d=DP445R5K
Ukupasa okufanayo onikwe kuko registraudid@gmail.com
Cachis Gnzl ingcebiso yakho ihambile kade hahaha; Oko kwenzeka kum ngenxa yokuphelelwa ngumonde hahaha; kulungile ndingasoloko ndibuyisela kwakhona, faka ios5 kwakhona kwaye ndiyenze njenge-iPhone entsha, akunjalo ???
ayinamsebenzi pablo, yiyeke ngoluhlobo
Ungqamaniso lweWi-Fi lukhubazekile kule beta yokuqala!
Gnzl: Andilifumani igama lokugqitha abandinike lona !! Ngaba iya kuba yenye?
Uxolo ukuba sisisiseko, kodwa kube kanye ngo-5.0, ukuya ku-4.3:
«… Ufaka i-DFU kwaye uqhagamshele kwi-iTunes kwaye ucinezele ukubuyisela…" Ndiyifaka njani kwi-DFU?
Ok ngoku ... andazi ukuba kutheni ndingakhange ndiyithathe megaupload
Uxolo ngokubuza ngaphambi kokukhangela:
ukubeka i-iphone kwi-dfu yakuba ihlaziyiwe kwi-ios5 ukubuyela kwi-ios 4.3:
Ndim ndedwa ongasebenziyo itunes 10.5 64bits kwiifestile? ikhompyuter ayizukundivulela yona
Inye into itunes 10.5 yee-mac eziyimfuneko ??? Kwakhona nje ukuba iphepha uze undinike ikhonkco le-ios5, ndenza ntoni ngalo ??? Ukuyifaka udinga inkqubo efana ne-tinyumbrella okanye i-cn itunes valeee
shift + buyisela
kwaye kutheni singadibani ndawonye i-20 kwaye sibe ngonjiniyela ???
Iya kuba ngcono, kwaye ithembeke ngakumbi, akunjalo?
Kulungile uMario, uTeddy ukuphendule ...
eyaziwa ngcono kunokuba imbi ukuyazi ...
Yonke into eyenzekayo nomntu we-imeyile ekhuthazwayo 🙂 Ngexesha nje bendisebenza yonke into 🙂
Akukho nto indisebenzelayo nge iTunes kwiWindows…. Ndicinga ukuba kuya kufuneka ndibuyele ku-4.3.3
UAntonio, i-iTunes 10.5 ye-winx64 ayisebenzi nam
Kwenzeka into efanayo kum, iifestile khange ziyivule
Ndiyikhuphe kwaye ndayifaka kwakhona i-10.3
Ndiyiqale kabusha ikhompyuter kwaye ndafaka i-10.5 ngaphandle kokufaka i-10.3 kwaye ngoku kuyinto eqhelekileyo kum
kwaye ngaba itunes 10.5 yee-windows 32 zikhona? iyasebenza?
Ewe, uJuanmi, jonga apha: http://iphoneism.com/2011/06/07/download-itunes-10-5-beta-for-windows-and-mac-direct-links/
Kwiingxaki zeMac itunes 10.5 ?? X yinyani xa sele ndikhuphele iTunes 10.5 ndiyifaka njani ngokukhuselekileyo ???
ulungile Gnzl, ukuba asikho mbi ... 😉
ukuba kuhamba kakuhle naye, sizamile, bendinokuthi nje abanye bakhuthazwe, siqiniseke unyaka wonke we-betas ...
Ewe u-Mario, ukuba andithethi nto, ukuba ufuna ukubeka i-imeyile kwaye abantu bakubhalele.
Ewe ewe, ukuba nabani na uyakhuthazwa, m4r10b@gmail.com
ukuba akunjalo, siya kuhlala sinerekhodi ...
enkosi Teddy. Ukuba ndifaka i-10.5, yogcino endilwenzileyo kwi-itunes 10.3 ndiphosile?
Ndiyayifumana, sele ndibuyisela isipele esidala ... Thixo wam, kuthathe iiyure ezintathu nayo yonke le nto ... enkosi ngokulunga ... ngoku makhe ndibone ukuba ndinokuphatha malini nge-iOS 3 ngaphandle kwe-cydia ... ... haha ​​okwangoku ndidlulisa i-backup kwi-ICloud kwimeko apho kunokwenzeka ukuba ndingabinangxaki zininzi ... enkosi ngayo yonke into iGnzl nabo bonke abantu nabo enkosi
I-lucas, kukho i-jailbreak, jonga kwi-iPhone News
Sele ndibuyisela isipele sam, ingaba ndim ndedwa ofake ios 5 ngenxa yeziko lezaziso? kuba icloud, kum ayisiyonto ingako ufuna ukuba ndikuxelele xD
Ewe, ndisenengxaki nge-iTunes 10.5 kwiifestile, ayinakho nokwenza ikopi yogcino kwaye ke andinabuganga bokufaka ii-5 kuyo, isekhona kwi-diapers kwaye eyona nto imbi kukuba ukuba ndiyafuna ukuya kwi-iTunes 10.3 ayikuvumeli nokuba kutheni isithi ithala leencwadi lenziwa kwenye itunes naziphi na izimvo?
Ngaba umntu othile ukwazile ukubuyisela ngokupheleleyo i-iphone (iiapps, iifoto, abafowunelwa, iisms ...) emva kokuhlaziya ukuya kwi-ios5?
IGnzl: Ewe kodwa ithiyithi…. Andihlekisi ...
UJuanmi: Ewe ndiyiphumezile, ngomzamo omkhulu kodwa ndiyifumene. Kuya kufuneka uyivumelanise kube kanye ukuze ikuvumele ubuyele kuhlaziyo lwangaphambili kamva ... ukuba kunokwenzeka oko ...
Ndincede ungavuli i-itunes 10.5 windows 7 nceda iGnzl undincede.
uyikhuphe, fakela i-10.3, uqalise kwakhona kwaye ufake i-10.5 NGAPHANDLE KOKUNGENAKHO
Gnzl, inyani kukuba njengoko bendikugxeka amaxesha amaninzi, namhlanje ndiyabulela ngawo wonke umsebenzi owenzileyo. Isithuba esiluncedo kakhulu koxinzelelo. Oko, njengoko kunokubonwa, baninzi kuthi. Umonde ongapheliyo ekuphenduleni yonke imibuzo. Umsebenzi ophambeneyo. Enkosi. Ndiza kuvavanya i-beta ...
Uxolo lucas, ungachaza ngakumbi?
Ndine-10.3 ene-backup ehlaziyiweyo, ke ukuba ndishiya i-iPhone iye kwi-zero, ngokucinezela iqhosha lasekunene kwaye ubuyisele kugcino, i-iPhone iyafana.
xa ufaka i-10.5, ifaka ngaphezulu kwe-10.3 kwaye yamkela ikopi ekufuneka ndiyibuyise efanayo?
Enkosi Gnzl ndizakuzama njengoba usitsho
Ewe, sele sinomdla kwi-akhawunti eqhelekileyo yonjiniyela yonyaka wofakelo ...
Ukuba kukho omnye umntu onomdla, thumela imeyile kuye m4r10b@gmail.com
Imibuliso kunye nombulelo gnzl ngombono.
Madoda ndiyigqibile, sele ndibuyisela isipele kwi-itunes 10.5 yee windows yuhuuuuuu
Molo, ngaba iakhawunti ye-imeyile ihlawulwe yi-PayPal? Kungenxa yokuba akaphenduli kwi-imeyile endimthumele yona ...
Umntu ofake i-iOS 5, ungandixelela ukuba ifowuni iyakusebenzela. Ndifundile kwiindawo ezininzi emva kokuba uhlaziye iApple ifumanise ukuba awunguye uMphuhlisi ngenxa yoko ayizukuvumela ukuba wenze i-Set-up kwaye ke ngekhe usebenze ngeSIM khadi yakho.
Luis, yile nto le ndlela, ukuba ubhalise ngokusemthethweni njengonjiniyela kwaye ukwazi ukuyisebenzisa njengefowuni.
Le ndlela isemthethweni.
Ngaba ukhona umntu onikwe impazamo 3194 xa ufaka ios5?
Molo, ndilandela ibhlog kwaye ndinemibuzo eliqela:
I-1- umalume we-registraudid akaphenduli ii-imeyile (kufuneka wenze ntoni?)
I-2- kunye neMARIO kukho ithuba lokujoyina uninzi kunye nokuthenga iAkhawunti yeDevelper. (Izixhobo ze-15-20 zinokubhaliswa kunye neakhawunti efanayo)
3- umntu okwazileyo ukufaka kwi-IOS5 unokwenza isikhokelo esineenkcukacha, inyathelo ngenyathelo (zininzi izimvo zabantu abangaphumelelanga, iimpazamo, njl.
Imibuliso kubo bonke, kwaye enkosi kwangaphambili! ...
Ndicinga ukuba kusemthethweni kuba iyasebenza. Kodwa into endicinga ukuba ayikho semthethweni ukuyivula kwaye ndikuhlawulise ngayo, ukuba andiqondi kakuhle ukuba "ungasenzela ubabalo" ukubeka ii-UDID zethu kuluhlu lwakho lwezixhobo endicinga ukuba Ukulinganiselwa, ke andicingi ukuba iApple ikubone kakuhle oko kwaye njengoko ifumanisile siza kubona ukuba i-iPhone esebenzayo iyakuhlala ixesha elingakanani.
Luis, ukubhalisa njengomvavanyi we-beta wezicelo zakhe.
Njengoko ndikuxelela ukuba kusemthethweni
Ahhh… yezicelo zayo, ke ngomnye umcimbi, kodwa ndisaphoswa lithuba lokuthengisa iiakhawunti ngokukhululekileyo. Mandingathembi kakhulu.
Kwithiyori wayengenako "ukuzithengisa", kodwa kuba awuyiyo eyokuvavanywa kwe-beta yokwenyani, uya kuyenza ukuxhasa iakhawunti, eyi- € 100 minyaka le ... yiza, nditsho.
ami Ndifumana impazamo 3002, kwaye ndizamile ukutshintsha i-usb kwaye ayisebenzi kwimackbook yam. Naluphi na uluvo lokuba ingaba yintoni, ndiyenza ukusuka kwi-iTunes 10.3.1 cinezela alt + ukukhangela uhlaziyo, ikhupha ios5, kodwa impazamo
Kulungile kwaye ndiyenza njani intlawulo kwi-PayPal, njengenkonzo yemveliso okanye njengesipho? Ndicinga ukuba malunga nePayPal zizinto ezahlukeneyo kwaye kungcono ukuqiniseka.
Andazi luis, thetha ngayo nerejistaudid
@Luis kufuneka uyenze njengesipho.
Nditshintshe amazibuko amawaka aliwaka kwaye akukho nto, nasiphi na esinye isisombululo?
Hayi ndiyifakile iTunes 10.5 ngaphandle kweengxaki kodwa ngoku xa ndifaka i-IOS5, sele ndinayo ifayile kwidesktop kwaye andazi ukuba kufuneka ndiyibeke phi.
@ eestveja Cinezela SHIFT + buyisela kwaye ukhethe ifayile oyilandileyo
Abo bafake i-Itunes 10.5, unayo kwiSpanish? Kungenxa yokuba ndibekwe ngesiNgesi kwaye akukho ndlela yokuyitshintsha, andifumani iilwimi ezininzi kuseto ... ngaba kunokwenzeka ukuba ngesiNgesi kuphela?
I-ALT + UPHANDO ayifanele? Nge-MAC ndifumana impazamo nge-iTunes 10.5
Enkosi i-RAMON sele iyifakile
Enkosi, sele ndihlawule njengesipho, ngoku kufuneka ndilinde wena ukuba usiqinisekise ukuze usibuyisele.
Umbuzo omnye, ngaba uyayenza i-Set-up xa ibonakala?
Ndisandula ukufaka i-iOS 5 enkosi kule ndlela kwaye iyamangalisa. Kwisiqingatha seyure ndiyigqibile yonke le nkqubo, inyani kukuba khange ndilindele ukuhoywa okunje kodwa ndifunde izimvo ezilungileyo kule post khange ndicinge ngayo umzuzwana ... kwaye bendinyanisile! IOS 5 isebenza ngokumangalisayo bazalwana, ewe, khumbula ukwenza i-iCloud kwaye usebenzise yonke into!
Imibuliso kwaye ndithatha ithuba lokucebisa kakhulu ngenkonzo! nge € 5 wamkelekile, sele ndisebenzisa i-iOS 5! Enkosi kwiindaba ze-iphone nangokubapapasha kunye nezifundo!
Yonke into i-ios 5 egqibeleleyo kunye nekhawulezayo esebenza kwi-iphone 4
Iposi eyonyanyekileyo ngogaxekile ...
Ngaba unengxaki yokuhlaziya izixhobo zakho?
molo ukhona umntu osebenza ngokuvumelanisa ne-iTunes nge-wifi?
UAntonio, kwi-beta 1 ungqamaniso lwe-wifi alusasebenzi, kunye nokuvumelanisa i-wifi uyayifuna itunes 10.5
Khange ndibenangxaki, ndiyaqikelela kuba ndiyasazi isizathu sempazamo nganye kwaye ndiyilungisa ngaphambi kokuba yenzeke.
Kwakhona, irejista yandichaza kakuhle.
Sele singabantu aba-3 abanezixhobo ezi-4 abanomdla kwiakhawunti yonjiniyela unyaka wonke, ukuba bayakhuthazwa abantu ukuba babhalele kum m4r10b@gmail.com
mna wena sitsho
KUQINISEKILE oku akukho semthethweni. Lo msebenzisi akanakubiza "ngale nkonzo" nokuba unengxaki okanye nantoni na oyibiza ngokuba yingxoxo oyisebenzisayo ukwenza inzuzo (5x3x100 fumana izibalo).
Akuvumelekile, funda iimeko ngokubanzi, ukuba wonke umntu atsibe kwaye anike ewe, ndiyamkela ngaphandle kokufunda. Oku kusemthethweni njengokuthatha ipaki ekoneni.
Sukucaphuka (isilumkiso kuba kufutshane apha wonke umntu unovakalelo kakhulu) kodwa kubonakala kum ukuba lowo "ungaziwayo" umsebenzisi omkhuthazayo = gnzl
Andinguye umphuhlisi we-yotuel, kwaye umba wokuba semthethweni sele kuxoxiwe ngezantsi, kufanelekile ukuba ube ngumvavanyi we-beta, kwaye hayi, awunakuhlawulisa, kodwa kuba awunguye umvavanyi we-beta kwaye ufuna i-iOS 5 kuya kufuneka fumana indlela, kwaye le kuphela komthetho.
(ekuphela kwendlela esemthethweni yokufaka i-iOS 5, ayisiyiyo into yokuba kusemthethweni ukuthengisa ukwenziwa kusebenze)
Kwipaypal kufuneka ubeke i-5,00. Okanye u-5 ?? IXxierto gnzl intle kakhulu
Yonke into ilungile, ibuyisela i-iphone 4 yam nge-i5. Abantu abathandekayo kwiyure sele benayo yonke into abayifunayo ukuqhubeka nokufaka i-beta. Siza kubona ukuba kuhamba njani. Ukubulisa.
Kulabo bafumana impazamo xa bebuyisela i-itunes, ngaba unalo ithuba lokufaka i-tinyumbrella?
Kuthekani ukuba kusemthethweni, kuthekani ukuba akukho semthethweni ... Wonke umntu makenze le nto ayifunayo, kwezi meko kufuneka simbulele nabani na okunika umthombo othembekileyo wokukwenza. Yiyo le ethintela isimanga esibi ...
Ndineengxaki ezinzima pk itunes 10.5 ayisebenzi kum
Ngaba ukhona umntu onokundinceda? Ndiyoyika ngakumbi i-pk ngoku ndinephepha elisindayo !!!
Ewe ndiyifakile ... ndiyibulele intaka yokufuna ukwazi kwaye ndibuyela ku-4.3.3 ayigqibi ukundenza ndizinze nge-beta ... mhlawumbi kamva ... inyani kukuba ndiyifumene Iincukuthu ezimbalwa ... kodwa kulungile ukwazi ukuba nangawuphi na umzuzu ndingabuya ...
Molweni bantu ndinombuzo:
xa ufaka i-IOS 5 emva koko inkohliso inokwenziwa ngeredsnow?
Kulabo kuni abangaqhelanga ukucinga nge-iPhone kunye neefirmwares zayo, kuya kufuneka niyazi ukuba i-beta ayikho "enkulu" njengoko umbhali weposti esitsho, kuba iyi-beta. Inezimbungulu ezininzi, kwaye ukuba i-jailbreak ingaphaya, andizukuxelela. Ngokumalunga nokuthengisa iakhawunti yonjiniyela, ndigcinile umbono wam.
Ukuba ndifumana, ngeli xabiso ndongeza i-UDID yakho kuluhlu lwam lwezixhobo….
Ndacinga ukuba ayibalulekanga kwaphela ukuyenza (akukho mthethweni)….
Andikwazi ukuzinikela ekususeni izimvo zabantu abanenjongo yokucaphukisa, ndinqwenela ukuba ungadeleli.
ubomi obubi sitsho
Oku kuqala ukuphuma ngaphandle, xDD
Bandinike inkonzo elungileyo kwaye ndiyacebisa, ixesha. Ndihlala ndincedisa kwizifundo kwaye le yenye. Nakuphi na ukungafaneleki okanye isithuko kuyakususwa njengoko kusengqiqweni
Bazalwana, kubonakala kumangalisa kum indlela abaphathana ngayo, nokuba banjani, baya kuhlala bengahambi kakuhle. Ndiyifumene inkonzo efakwe yi-Gnzl kwaye indikhonze ngokukhawuleza kwaye nayo yonke into ilunge kakhulu, andiqondi ukuba kutheni le nto icaphukisayo. Ukuba kukho into esebenza kakuhle, ungabi njalo. Nabani ongakuthandiyo kungcono athule, kodwa musani ukuthukana bazalwana
Uyeke ukuphikisana, nantsi sizofunda nge-iPhone kwaye ndifunde lukhulu apha nakwezinye iiblogi, kodwa andizukundithuka. Ukuba andisithandi isifundo, andisisebenzisi nje, ixesha. Yibani nengqiqo bazalwana!
Haberr, masingawushiyi umbandela, ukuthukwa kunye nokungahlonitshwa akuqwalaselwa
Ngokuqinisekileyo andicingi ukuba zininzi iibugs, kodwa iapile ibingangxamela ukukhupha i-beta entsha ukuyisombulula, iindaba zinomdla kwaye ndiyaqhubeka nokukhuphela.
Nabani na okhuthazayo okanye owaziyo onomdla ekwabelaneni ngeakhawunti yonjiniyela ???
@ iimpazamo Ukuba ikunceda okuthile, ekugqibeleni ndiye ndafumanisa ukuba bendinesambrela endandisisebenzisa kwi-iphone 3g emgqomeni wokuphinda usetyenziswe, ndiyisusile ndatshintsha ndasebenza kwiseva yeapile kwaye sele ndisebenza
Kulunge kakhulu !! Omnye u-q wongezwa kwinqwelo! Kwaye ndingatsho ukuba ndonwabile kakhulu, ndinxibelelane nabo ngale ntsasa, ngaphakathi kwesiqingatha seyure bandiphendulile kwaye ndiyenzile intlawulo kwaye malunga nemizuzu eli-10 baphendule ukuba sele beyibhalisile kwaye wenze njalo !!
Kwabo bathandabuzayo, ungathandabuzi! Zichanekile kakhulu.
Gnzl ndinombuzo: ukuba ndibeka iakhawunti yam yeMobileMe kwi-iCloud, ayindiboni, itsho into enje ngempazamo yokungqinisisa i-URL engalunganga…. Inokuba yintoni? Enkosi!!!
I-Pablo, njengoko ikwisigaba se-beta inokunika iimpazamo, zama kwakhona kamva, kamva okanye ngomso.
Ndizakuyenza lonto; Ngokukhawuleza ukuba iyasebenza, ndingayisusa iakhawunti yam yeselfowuni? Enkosi!
Ewe, bendihamba nesithuba ukusukela oko sasenziwe. Ndithathe ikhefu emsebenzini emva kwemini kwaye ndibuyile nge IOS5 ndisahlala kwi Iphone4 yam
Kulabo baqhubeka nokujikeleza ngokusesikweni kwento leyo, musa ukuyenza, ixesha. I-Gnzl sele inele ngokwaneleyo ukuba ithi ayinguye lo mntu ubhalisayo kwaye irejista leyo iyakuthanda ukukubhalisa njengeyona nto ungeyiyo, oko kukuthi, umvavanyi we-beta. Ukuba wayebizwa ngokuba yi-caritas, wayenokuzivumela ukuba enze izinto ngaphandle kokuhlawulisa, kodwa ejonga ubungakanani benceba kunye nemali acela ukuyenza, hayi sisikhalazo esenziweyo ...
Ndisebenzise iselfowuni kakhulu emva kwemini, ekuphela kwesikhalazo endinaso kukubhala kwi-safaria ehamba kakubi ukuthetha inyani. Ukuba ukulungiswa okuzenzekelayo kuyasebenza, kusenza sibe mdaka xa sisithi "hayi" kwigama eliphakanyisiweyo, asinakubuyela umva kwisicatshulwa ukucima unobumba "oxhoma" konke okubhaliweyo kwaye ukuba siyanyanzela ukuvalwa kwe-safari
Ngaphandle koko ukuza kuthi ga ngoku kulungile
umntu othile undinike isandla ngempazamo 3002?
Andibhalanga apha iinyanga, kodwa ndifunda apha -kwolawulo kuluvo lokuba kukho- ukungabi nantlonelo okuqhubekayo, andinakukhetha ngaphandle kokuzibiza.
Ndiyayazi iGnzl kwaye ndicinga ukuba into ethethwe apha sisigwebo sokwenyani. Khange ayitsho kuba ayizukuziphatha kakuhle, kodwa senditshilo: ngumfana OBHALA KWAKHO kwaye WAKUFUNDISA ngoba uyalithanda eli hlabathi kwaye uyakuthanda ukwabelana ngolwazi, kodwa akaludingi konke konke kuba phakathi kwezinye izinto , Umntu onesidanga sokwakha uhlala emfutshane ngexesha nangemali. Kwaye ubuncinci ndiyazi ukuba iGnzl ayinalo ixesha kwaye ichitha kakhulu ekuphenduleni imibuzo kwaye izama ukukunceda ngeJailbreak.
Kule posi unamava anelisayo kunye nomntu oye wakunika inkonzo kwaye uxelele ngayo. Kwaye ubulewe ngenxa yayo okanye abantu bebesenza i-SPAM (ayivumelekanga kwizimvo).
Nceda, imfundo ethe kratya kancinane evela kwabo bengahloniphi rhoqo. Ndicinga ukuba abanye abathe baveza uluvo lwabo kunye nemibulelo yabo bayenza icace into yokuba uninzi lucinga ntoni, kodwa njengesiqhelo, abambalwa ngamanye amaxesha lolona luvakalayo.
Impazamo 3002 yeyokunika UPHANDO kwaye hayi RESTORE
Enkosi uCarlos, inyani kukuba ukuba ibingengabo abantu abayixabisayo iinzame zakho, umnqweno wakho ungathathwa ngamagqabantshintshi ...
Yonke into igqibelele, intlawulo kunye nesiqingatha seyure efakiweyo kwaye iyasebenza! 😉
Kwaye iGnzl inonyamezelo oluninzi kuba iya ukuba khange ndikoyike ukuba ube namathandabuzo hahaha
KOKUQALA Gnzl ndiyabulela kakhulu ngegalelo, kwaye inyani kukuba andisiqondi isizathu sendlela yokuthetha kumagqabantshintshi amaninzi.
Inyani yile yokuba yonke into igqibelele, unyango olunobhaliso oluhle kakhulu, wayiphendula imibuzo yam ngaphambi kokuba ndenze intlawulo, emva koko ke ngaphantsi kwe-30min wayenempendulo.
IOS ibindilungele ngalo mzuzu, nditsho kuvavanya iakhawunti abandenzele yona kwi-imeyile ye-me.com. Isantya senkqubo sihle kakhulu, ubuncinci kwi-iphone 4, ndiyothuka ukuba izinzile kangakanani ibeta yokuqala. Ingayinto enomdla kwisithuba apho abasebenzisi abane-iOS 5 banokuthi babe negalelo kwaye bongeza kwaye bebeka izimvo kwimisebenzi emitsha efumanekayo, kuba baninzi kwaye andazi ukuba yintoni kanye kanye.
Ngokumalunga nokuvumelanisa ngeWifi, ndicinga ukuba ayifumaneki okwangoku, nangona kukho iindlela ezimbalwa kuyo. Ukuba umntu othile uyakwazi ukuyisebenzisa kwaye angabeka izimvo kuyo, iyaxabiswa.
Ngubani ondenzela inceba yokubhalisa i-UDID kwaye ndiza kuyibhatala ngenye i-akhawunti yebhanki
Ukusebenza ngokugqibeleleyo kunye nemibono nge-iOS5 enkosi kuwe !!
Ukwanga okukhulu !!
Omnye umbuzo: kwiscreen sokutshixa ekufuneka siphume? Ndiyibonile imifanekiso inolwazi kwiscreen sokutshixa njengemozulu nakwimayini nge-ios5 akukho nto iphuma nantoni na….
Kulabo kuthi bane-WIn 7 64bits ..
Ndifundile ukuba i-iTunes 10.5 64 ayisebenzi, kwaye ndiqinisekisile ukuba ayiqali kwiikhompyuter ezininzi.
Kufuneka wenze ntoni ukubuyisela ikopi?
Yonke into enhle, unyango olugqwesileyo, enkosi ngento yonke, intle lonto
Yiya kwi-currada yokuba umhleli ubambekile ukuze abambalwa babe ne-iOS5 kwifowuni, nangaphezulu, ngenkonzo yabathengi ifakiwe ... Kwaye uninzi lwenu lunobuso bokungcikivwa, ukugxekwa kunye nogaxekile. Ngoku, bendifuna ukuthi, ukuba bekungekatsho, ukuba awuzenzi i-backups kwi-iOS5 ucinga ukuba uya kuba nakho ukuzisebenzisa kwi-4.3.3, ukuba ndilahlekile iifoto ezininzi ngenxa yayo. ICloud inyani kukuba ibingahambi kakuhle kum (khange indivumele ndikhethe loluphi ulwazi lokugcina umzekelo). Enye into kukuba indinike impazamo xa ibuyisela kwi-iTunes enento yokwenza nempazamo kwifayile yemikhosi, kufuneka uyihlele kwaye ihambe ngokugqibeleleyo. Ewe, akukho nto iyenye, ukuvuyisana nomonde uGnzl abenawo namhlanje ...
ULouis wilson sitsho
Enkosi ngenkxalabo yethu sonke, abo bathanda izinto zenziwe kakuhle, imihlali yaseArgentina
Ndibhalela ukuthi nabani na ofuna ukuzama i-iOS 5 akhuthazwe kwaye ayenze.
Bendinexhala ukusukela oko yaziswa kwaye namhlanje ndothuswa kukufumana iindaba zendlela yokubhalisa isixhobo sam ngaphandle konjiniyela kwaye ndigqibe kwelokuba ndizame registraudid@gmail.com njengoko isitsho eposini kunye ne-5 iyonke.
Ewe, inyani kukuba kuthathe umba wemizuzu engama-30, ngaphezulu kwam ukwenza ikopi kunye nokuphononongwa!
Bayakuchazela ukuba wenze njani kwaye kufuneka wehle ezantsi.
Kwaye akukho nto, ndinayo okwangoku yonke into ihamba kakuhle kwaye ndizamile ukuvalelwa ejele (Redsn0w 0.9.8b1) kwaye kulungile!
Vuyisana kwaye uthi kusekho abantu abazimiseleyo!
Khange ndiyenze kwaye andizukuyenza, kodwa kuba ndingumntu ojolise ekujongeni, ndicinga ukuba le yeyona nto ilungileyo.
Molo, ndinombuzo ngawo.
Ukuba ekugqibeleni ndigqibe kwelokuba ndibhalise i-UDID yam (ndine-ipad 2), kwaye ndilayishe kwi-ios 5.0, ndiyaqonda ukuba andizukuphulukana nayo nantoni na endiyifakileyo, kuba andinasiphatho sejele okanye nantoni na, kodwa… .
Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu andithandi ios 5, ndingayithoba ngokulula ibuyele kwi-4.3.3?
Yiza, sele sine-4 yethu yeakhawunti yonjineli ...
molo, lo mbuzo ngowakwa-gnzl, ngaba unalo uluvo lokuba kutheni xa ufaka i-ios 5 ndilahlekelwe ngabo bonke abantu endiqhagamshelana nabo kwincwadi yeefowuni? Phambi kokuba ndihlaziye kwi-iOS 5 ndenze ikopi yogcino kwi-iTunes 10.5 kwaye ndaphinda ndayihlaziya ndayibuyisela indawo yogcino eyabakho ngayo i-iPhone njengoko ibinayo ngaphambi kwealam kunye noseto ngokubanzi kodwa into endingakhange ndiyidibanise yayingabafowunelwa kwaye yinto enkulu leyo unayo nayiphi na ingcamango yokuba ungazifumana njani kwakhona? enkosi kwangaphambili kwaye ndiyavuyisana nesithuba.
Ewe, andinalwazi, ndibasindise ngokugqibeleleyo.
Kwi-iTunes khetha ukhetho lokuvumelanisa abafowunelwa kunye nokuvumelanisa, iya kubadlulisela kuwe.
Enkosi, ndizakuzama ukubona ukuba kwenzeka ntoni. Ihagi
Molo nge-Gnzl: umbuzo omnye ongaphezulu… .. kulindeleke ukuba iscreen sokutshixa kufuneka sibonise ulwazi olufana nemozulu, ii-imeyile, njalo njalo, akunjalo? Ndibone umfanekiso ongaqhelekanga kunye ne-i5 kunye nesitshixo esikrwada ngolwazi lwemozulu kwaye andisifumani; (
Pablo, qwalasela ixesha kwisicelo esihambelanayo kwaye uqwalasele useto lwayo kuseto lwe-iPhone, iya kubonakala
Okokuqala, ndingathanda ukuxolisa ngengcaciso yam yokuqala ... bendingazimiselanga kukhubekisa nabani na ngokuthi kwakungabonakali kunesimilo kum ... (kwa oko kukukhathazeka kwam kuba khange yenzeke kum kuqala).
Okwesibini, enkosi ngomsebenzi owenzela abahlali.
Enkosi uLisergio, ndiyayixabisa inkcazo oyenzileyo, ngenene.
Molo, umntu ukwazile ukwenza ugcino olupheleleyo kwi-icloud kuba ndizamile kabini izolo, yabambeka kangangeeyure ezimbini kwaye xa ndandizakuyigqiba yandixelela ukuba i-backup ayiphumelelanga, kusenokwenzeka ukuba le nkqubo ayikho usebenza ngokufanelekileyo? Ndiza kuzama kwakhona namhlanje okanye awuyicebisi?
Ndinokukhetha iWijethi yeMozulu kunye neapps yemozulu njengophawu lwendawo kwiziko lesaziso ukuba liyavela kodwa hayi kwiscreen sokukhiya kwaye umbuzo wam ngowokuba kufuneka ihlale ivela apho njengoko ndifumana xa ndibukele ezinye ios5 iividiyo okanye hayi
Akukho Pablo, hayi kwiscreen sokutshixa, kuphela kwiziko lezaziso, apho kuya kubakho i-tweak kwi-cydia.
Ahm kulungile; Ukusuka kwimifanekiso ethile endiyibonileyo, kubonakala ngathi ulwazi lwemozulu luya kuhlala luvela kwisikrini esitshixwayo… ..
Hayi uxolo kodwa ngoku ndiyakwazi ukuqwalasela iakhawunti yam yeMobileMe kwi-iCloud kodwa indinika impazamo entsha: ithi iakhawunti yam yeMobileMe ayifuduselwanga kwi-iCloud…. Ndingenza ntoni? Yeka ngoku kwaye usete ngokuthe ngqo njengeakhawunti ye-MobileMe?
Uluvo olukhulu uCarlos. Isifundo kunye namanyathelo ekufuneka uwalandele ukubuyela kwi-iOS 4.3.x iya kuba sisiseko. Ndiyitsho le nto xa sidiniwe yi-iOS 5 kwaye sifuna ukubuyela kwi-jailbreak yangaphambili engafakwanga.
Gnzl, uyasebenza, umonde !!. Ndiyabulisa!
NgoLwesihlanu ndenza uvavanyo kwaye ndashicilela isifundo sokwehlisa ukuya kwi-4.3.3
Gnzl ndiyaqonda ukuba awukavuki uye kwi-5? Okanye uza kuzama ukuyikhuphela kwi-4.3.3 ?? .. Siza kuhlala siyazi loo mfundo .. Ndiyathemba ukuba andizukuba nangxaki ngoku xa inyukela ku-5 ... ndiza kube ndiphawula ngezinto (ezo emva kwe1.30hrs yokuhlawula ezo zobhalisoUDID azithumeli nto) .. Ndiyabulisa !!
Ewe ndilayishe, ke ngomso ndiza kwenza enye isifundo (i-firmware yesiqhelo) kwaye ebusuku ndiza kuthoba isidima ndibeke isifundo kuwe
Enkosi kakhulu Gnzl !!! .. sizakulinda ezo tutos! ..
Umsebenzi omkhulu Gnzl.
Ndiqinisekile ukuba baninzi ngakumbi abalixabisayo igalelo lakho ngokuqinisekileyo kunabo beza apha bezokucaphukisa, ukuthuka, njl. (izolo ndikhulule ezinye izimvo)
Konke okwenzayo kukunika ingxelo, kwaye uyenza kakuhle, emva koko wonke umntu ukhululekile ukuba enze le nto ayifunayo.
Ngendlela, abantu kwi-regraudid banobungcali, ngokukhawuleza kwaye baphendule i-imeyile nganye.
Ungakholelwa ukuba bandibize njengonyana we-bitch?
Inyani yile yokuba abantu bayadika kwaye baxhaswe kukungabikho komntu kwi-intanethi abazinikelayo ukuba bacaphukise.
Ndiyabulela kuni nonke ngombulelo, bayabulelwa kakhulu.
Ezo registraudid@gmail.com Kubonakala ngathi baziphatha kakuhle, ndonwabile ukuba ndibacebisile.
Gnzl, andazi ukuba uhoya njani kwezo zimvo, ngasemva kwekhibhodi nabani na onokuthi nantoni na, bacinga ukuba banesibindi kwelinye icala, baqinisekile ukuba zii-wankers ezinamaqhakuva ebusweni, azidibananga umfazi.
Oko kwathethi, ndiza kuchaza. Sele ndihlawule i-euro ezintlanu kwaye ndinekhonkco lokukhuphela. Ndiphumelele kwaye ndiyifakile i-itunes 5 beta, kodwa ayenzi nto, cofa kabini kwaye ayivuli? ngoba?
UJavier. khipha i-itunes 10.5, qala kwakhona, faka i-10.3 kwaye ngaphandle kokufaka ungafaki ukufaka i-10.5 ngaphezulu
Molo, ndikwazile ukufaka ku-5 kodwa ingxaki ebendinayo kukufaka i-itunes 10.5, xa ndiyifaka kamva andinakuyivula kwaye andisazi isizathu, ndizamile yonke into kwaye khange kwenzeke ngento endingenayo ndikwazile ukuvumelanisa.
Ndiyakuxelela ukuba ukuya ezantsi ku-4.3.3 kulula kakhulu kwaye andikaze ndiphazamisane ne-iphone, bendihlala ndisoyika kakhulu ukwenza iJele, ke ungakhathazeki malunga nokuhla uye ku-4.3.3 !!!
Ukuba umntu angandixelela iqhinga le-iTunes ndingalixabisa!
Ndinika ingxelo yokuba abantu registraudid@gmail.com Baphendule ngokukhawuleza okukhulu, kuyabonakala ukuba yonke into ihamba kakuhle, ndikhuphela i-IOS 5 ye-iPhone yam, ngale mvakwemini ekhaya (ukuze ndikwazi ukwenza isipele) ndiza kuyibuyisela kwaye ndiza kukwazisa ..
Gnzl, bendifuna ukukubuza inceba: ungandinika inyathelo elikhawulezileyo ngenyathelo lendlela oyenze ngayo ngaphandle kwengxaki? .. Ndine iphone4 (esemthethweni eneorenji) kunye ne-mac (ikhephu L) ekhaya ..
Enkosi kunye "namagama angenangqondo .. iindlebe ezingevayo" .. ibhlog efanelekileyo!
UCarlos, kufana nolunye uhlaziyo.
Ugcina ukhuphelo kunye ne-itunes kwaye ucinezele i-ALT + ubuyisele kwaye ukhethe ii-5 ezikhutshelweyo
Gnzl, ukubuyiselwa, ukusuka kwi-itunes 10.3 okanye ngo-10.5 ???
kwinto endiyiqondayo evela kumagqabantshintshi:
Nje ukuba ibuyiselwe kwaye i-iPhone 100% isebenze: ngaba ndiyamxelela ukuba asebenzise i-backup ukubuyisa i-ajenda yam, iiapps, njl. okanye ndiyayilungiselela ukuba ibe ntsha? nabani na onceda le mibuzo ndiyayixabisa;) .. ENKOSI !!!! ..
Unokwenza ukubuyisela kuye nakubani na ...
Ndihlala ndikhetha njenge-iPhone entsha, kodwa i-SMS, imidlalo yomdlalo, njl.
(i-ajenda, umculo, njl, ukuba kuyenzeka)
Enkosi Gnzl! ..
Ugqibe ekubeni, ndiza kunxibelelana nezo majetes de registraudid. Andikwazi ukuyithatha kwakhona ngaphandle kokuzama i-iOS 5.
Usale kakuhle ngebanjwa elingafakwanga, nangona ndiyathemba ukuba izakubona kungekudala.
Umbuzo omnye, intlawulo yenziwa kukudluliselwa kwebhanki?
I-Pecks, intlawulo yi-PAYPAL, baphendula kwimizuzu emi-5 nge-imeyile yokuqala enezikhonkco zokukhuphela, emva koko xa bebhalise i-UDID yakho bakuthumela i-imeyile yesibini (kwimeko yam 1.5hrs) kunye nenyathelo elincinci ngenyathelo kunye Ukuqhubeka kwerejista njengonjiniyela ...
Eminye ndiza kukuxelela ukuba iyandisebenzela okanye ayisebenzi .. okoko nje ndigodukayo ..
Akukho nto i-Gnzl, ndiyifakile i-itunes 10.3 yokuqalisa kwakhona, ndifaka i-beta eyi-10.5 ngaphezulu, kwaye ayisebenzi, ayivuli, naziphi na izimvo?
I-Gnzl ndizamile yonke into, ndikhuphe amaxesha amaninzi kwaye ndaphinda ndafaka kwaye akukho nto, ndide ndikhuphe zonke iinkqubo zeapile, kodwa akukho ndlela, ndikhathazekile kakhulu yi-itunes 10.5 pk ios 5 efakwe ngokugqibeleleyo. 🙁
Javier, ndandineengxaki nam. Ekugqibeleni ndiyikhuphile i-10.5, kwaye ndayifaka kwakhona (ngaphandle kokufaka i-10.3 ngaphambili) kwaye yandisebenzela. Ukuphumelela i-7 64 bit.
USergio76, xa ufaka i-IOS 5, yonke into isebenza ngokugqibeleleyo kuwe? iifowuni, ii -apps (whastapp), njl, njl ...? '???
Ndiyaqonda ukuba ngaphandle kwe-itunes 10.5 awunakho ukungqamanisa ukubuyisa abafowunelwa bakho, ii-imeyile, njl njl, kwifowuni, akunjalo?
Kulungile ukuba ungandixelela kancinci .. Ndayifaka i-itunes 10.5 kwi-WIN 7 32bits eofisini ukuvavanya kwaye ifakwe kakuhle, ngaphandle kokucima u-10.3 okanye nantoni na ..
Enkosi ngoku, ndizakuzama le undixelela yona.
Ukusuka kwinto endiyiqondayo, ukufaka i-IOS5 kulungile nge-iTunes 10.3, kodwa ishiya i-iPhone yakho ngaphandle kwedatha, kwaye emva koko ukubuyisela idatha oyifunayo iTunes 10.5, ingaba ichanekile?
Kunjengokuba usitsho, Javier. Ndiphucule ukusuka kwi-iTunes 10.3, kwaye xa ndafaka i-iOS 5 ndafaka i-iTunes 10.5 ndayibuyisela idatha yam ngaphandle kwengxaki.
Unyango oluhle olufunyenwe ngu registraudid@gmail.com, Bathathe imizuzu embalwa kuyo yonke le nkqubo. Kucetyiswa i-100%!
Ukuphuculwa kweMINI TUTO ukuya kwi-i5:
faka itunes 10.5 beta
Khuphela ios 5 beta 1
qhagamshela isixhobo kwaye kwi-iTunes cinezela i-alt (mac) okanye ishifti (win) kwaye ucofe ukubuyisela.
Yehla uye kwi-4.3.3
I-SHSH ayimfuneko, ke qiniseka ukuba unayo ifayile yokubamba ekwimeko egqibeleleyo, oko kukuthi, ngaphandle kokuguqulwa yi-tyniumbrella. Ukuba uyilungisile .. vula i-tinyumbrella kwaye kwicandelo le-«Phambili» cima ukhetho «Cwangcisa iinginginya kwi-cydia xa uphuma (ukuba ufuna ukubuyisela okucocekileyo kwi-apula sukukhangela le bhokisi» kwaye
kwaye ngoku kuya kufuneka wenze okufanayo nokuhlaziya kodwa ukhethe i-firmware 4.3.3
Ukuba inika impazamo, zama ukuyifaka kwimowudi ye-DFU
Ndiyenzile ngoluhlobo kwaye yonke into igqibelele.
Wowu, kuye kwafuneka ndifunde amagqabantshintshi angama-260 kule posi kwaye ndifumene iingcebiso ezinomdla ukuze ndikwazi ukufaka i-IOS 5 ngaphandle kweengxaki, ndiyenzile le nkqubo ngolu hlobo lulandelayo kwaye isebenze ngokumangalisayo kum.
* Khipha iTinyumbrella
* Khipha iWifi Sync yeso sizathu seekopi zokubuyiselwa ekubonakala ukuba zikhankanyiwe kwezinye iiforamu ezingakuvumeliyo ukuba wenze iikopi zokubuyisela
* Cima ifayile yokubamba
* Khipha itunes 10.3
* Ndenze ikopi yokulondoloza umculo wam kunye nayo yonke ifolda ye-itunes (kubandakanya iinkqubo kunye neefayile zoqwalaselo xa ndinokubuyisela i-10.3, ndiza kuba nayo yonke into njengakuqala)
* Ndaphinda ndaqalisa
* Faka iitunes 10.5
* Beka iphone kwi-DFU
* Ndiqale ukubuyisela kunye ne-voila, ngexeshana bendine-IOS 5.0 efakiweyo, ngaphandle kwengxaki.
Ngendlela irejista eyenze ngayo kum registraudid@gmail.com kwaye kungaphelanga nemizuzu emibini bendiyibhalisile.
Imibuliso kunye nokuvuyisana nephepha ngamanqaku alo abalaseleyo.
Ndingathanda ukwabelana ngamava am, eyona yayiyeyona ilungileyo. Ngaphandle kokuqala ngokubhekisa kumagqabantshintshi e-iOS ahlekisayo, ngaba ulihlwempu nge-iPhone? Kulungile, uhlala phi? Iziphumo zangaphandle zihlala kakuhle !!
Ngoku ewe, idilesi yokwenza i-UDID isebenze, ndiyenzile kwaye ikhawulezile kwaye ngaphandle kwengxaki.
Ndikwazile ukufaka i-iOS 5 ngaphandle kwengxaki kwiyure enye kunye nokubuyiselwa okupheleleyo kogcino lwam.
Indawo endisebenza kuyo xa ndiqala uhlaziyo:
1) Hlala uhamba kwicala lokukhanya, andizange ndifake nayiphi na i-cydia okanye i-timhumbrella okanye nayiphi na into enjalo, ndiyigosa le-apula. Ndingomnye wabo bakholelwa ukuba amava anikezwe umsebenzisi weapile yeyona ilungileyo kwaye ke, kungcono ukuba iqhubeke ngaloo ndlela.
Ndiyakucacisa oku kuba ndibone ukuba abanye abasebenzisi baneengxaki zokuhlaziya kwaye kungenxa yokuba babenezinto ezinje ezifakiwe.
2) PC yeWindows XP SP3
3) itunes 10.3 (nditsho no-10.3.1)
I-4) ndandisele ndiyenzile intlawulo ye- € 5 kunye ne-imeyile yokuqinisekisa ebonisa ukuba i-UDID yam sele idityaniswe kwiakhawunti yonjiniyela.
1) Ngqamanisa iphone yam kunye ne-ios 4.3.3 okokugqibela ukugcina ukhuphelo oluhlaziyiweyo.
2) Shift + Buyisela kwi-iTunes 10.3
3) Ndikhangela kwaye ndikhethe ios5.
4) Ndilindele ngolangazelelo uhlaziyo ukugqiba.
5) Nje ukuba kugqityiwe, izikrini zoqwalaselo ziyavela kwi-iphone, apho sikhetha ulwimi, ingingqi, njl.
6) Xa sifika kwiscreen apho sibuzwa khona ukuba sifuna ukuba i-iPhone yenziwe isebenze entsha okanye kwi-iCloud yogcino okanye kwi-iTunes yogcino, sibeka eyokugqibela, kwindawo yogcino iTunes.
7) Xa usenza oku, i-iphone izama ukunxibelelana ne-itunes 10.3, emva koko i-itunes isibonisa umyalezo obonisa ukuba i-5 ayihambelani ne-iTunes 10.3.
8) Siyaqhubeka nokufaka i-iTunes 10.5 NGAPHANDLE KOKUNGENISWA 10.3, Oko kukuthi, siyayivala ipowusta ebonakala kwinqanaba 7, vala iTunes 10.3 kwaye ucofe nje kabini kuseto lwe-iTunes 10.5.
9) xa igqiba ukufaka, iphone ibhaqeka ngokuzenzekelayo kwaye siza kubuzwa ukuba zeziphi i-backups ezigciniweyo esifuna ukuzibuyisela.
10) Sikhetha eyokugqibela eyenziwe kwinqaku 1 kunye ne-voila, emva kwethutyana sinee-5 zokuzonwabisa.
Enkosi GNZL !!!!!!!
I-ALEXRIV, beka i-imeyile yakho ethi registraudid ime apha ukubona ukuba kukho iingxaki na.
Zihlobo, i-1000% iqinisekisile kwaye iyacebisa !!!, kwimizuzu embalwa ndenze intlawulo kwaye sele ndikulungele ukuphinda ndiyenze i-iphone. Zintle !!
Molweni nonke, ndiqinisekisa yonke into endiyenzileyo ukuya kwi-5.0 ngaphandle kwengxaki kwaye ndibulela abantu kwi-regraudid, kakhulu kwaye banoxanduva ..
Amanyathelo endiwenzileyo ukubuyisela iphone4 yam kwi-IOS 5 beta. NjengoPablosda, i-iPhone yam isemthethweni ngokupheleleyo kwaye ayikaze ijele.
Phumelela i-7 32bits.
1- Ndiyifakile itunes 10.5 ngaphezulu kwe-10.3 (nditsho ne-10.3.1) ..
2- Ndidibanise i-iPhone yam kwaye ndenza i-backup
3- emva koko ndibuyisele iphone yam kwi-IOS 5
4- linda ukuba ifake ... ndilandele onke amanyathelo
5- Xa ukhetha iphone entsha, buyisela kwi-icloud okanye ubuyisele kwi-iTunes, ndisebenzise eyokugqibela.
6- FUNDA yonke into eyi-100% isebenza ngalo lonke ulwazi lwam kwifowuni ...
Enkosi nonke ngokuphendula imibuzo yam kunye neqela registraudid@gmail.com
ngakumbi ENKOSI kuGnzl ngomsebenzi obalaseleyo awenzayo yonke imihla!
Ndibuya nombuzo: phi kwaye yenziwa njani ukuze uluhlu lwee-imeyile, ii-sms ezingafundwanga, ii-whatsapp ezingafundwanga, njl njl. Zivele kwiscreen se-LOCK ???? Ukuba ndibona yonke loo nto kanye ngaphakathi kwifowuni isenza isenzo sisezantsi sibonisa iwindow entsha yesaziso, kodwa kwi-LOCK SCREEN nope! .. umntu uncede !? ..
Molo, nam ndikujoyine, thumela i-imeyile ku registraudid@gmail.com kwaye konke kukhulu.
Kwimeko yam ndiyakuxelela, ndiyenzile nge-IPAD2 Wifi indibize kancinci ngenxa yemeko yempazamo 3915 kodwa ukungena kwifayile yokubamba ndiyisombulule ngokukhawuleza, yonke into egqibeleleyo IPAD2 isebenza ngokugqibeleleyo.
Ixesha lokusebenza lisebenza, kuvavanywa
I-Safari iyasebenza, kuvavanywa
I-appstore iyasebenza, kuvavanywa
I-Skype iyasebenza, kuvavanywa
Iposi kunye nabanye zilungile, ke okwangoku ndonwabile
diooooos ndiyifumene itunes 10.5 yokusebenza !!!!!
Ndiyikhuphile i-itunes 10.3 kwipaneli yokulawula i-win7, KODWA KONGEZO NALUPHI UMGANGATHO WEENKQUBO ZE-APLE bendilele macala onke, emva koko ndafaka i-10.5 kwaye ekugqibeleni yavula, yabona iphone yam ndalandela amanyathelo. Ndibuyisele kwi-iTunes backup, nayo yonke into ilungile
Umbuliso kunye nombulelo kubo bonke !!!!
Ndimele ukuthi kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sobabini nomhlobo wam senze oko kuchazwe nguGonzalo emnyango saza sanxibelelana nerejistraudid… Kwakukhawuleza, kubi, kufanelekile kwaye kwenziwa isigqibo… Ngokubanzi ama-200% anelisekile…. Ios5… Ummangaliso, kuyinyani ukuba i-99% yezinto ezikwi-cydia azisebenzi kodwa kuyinyani ukuba i-uisettings kunye ne-install0us kokokuqala ukusukela kwi-iPhone 3G ukuba isixa se-tweaks esihlala sisenza ungaphuthelwa kakhulu Beka, ngakumbi ndicinga ukuba yeyiphi i-multiflow kunye ne "4" tweaks ngaphezulu enokuba yeyona fowuni igqibeleleyo. Enkosi Gonzalo ngolwazi kwaye kwakhona ukubhalisela ubunzulu bakho kunye nesantya… Ciaooo
Ndine windows vista 32. Kwaye andikwazi ukuvula i-iTunes, ndicinga ukuba ndim ndedwa !!!! Iyacaphukisa into !!! UCarlos ndincede !!!
Ndinxibelelane nabo ngale ntsasa, baphendule ngokukhawuleza okukhulu. Intlawulo yipalpal.
Bezichanekile ngokuchanekileyo kwaye bekhawuleza kakhulu, ukongeza, bendinemibuzo eyongezelelweyo kwaye bayiphendulile ngaphandle kwengxaki !!!
Ndizicebisa ngokupheleleyo !! Ndonwabe kakhulu nge-IOS5, kwaye ukuyivavanya !!
Ngaphandle koko, ndinayo i-iPhone 3GS kwaye ingamanzi aphezulu kum !! Ngoku ndiza kuyaphula ejele, ukufaka ii -apps ezimbalwa kunye nezinye i-tweak 😀
Ndilinde impendulo evela kwi-registrauid ,,,
I-Sergio76 yenzekile into efanayo kum kwaye ndiyikhuphile yonke into, i-itunes 10.3, i-bonjour, nayo yonke into enxulumene neapile ukusuka kwipaneli yolawulo-iinkqubo kunye neempawu. Ndiyibuyisile, ndiyibuyisele kwakhona i-itunes 10.5 kwaye ibisebenza kum.
Into endingayifumaniyo kukufumana imessages, okanye ngaba ndixakekile, okanye ayifakwanga kule beta?
UJavier, imessages yiMiyalezo, ukuba uthumela umntu nge-iphone kunye ne-5, baya kukhululeka
Sele ndiyenzile yonke into kwaye akhonto, inyani kukuba andiyiqondi, ndizakuqhubeka ndizama !!! Ngethamsanqa phezolo ndikwazile ukuyikhuphela kwi-4.3.3
Ngapha koko, ezinye iingcebiso azindenzakalisi.
Siyaqhubeka kwesinye isikhundla.